Ny olona tsy vita vaksiny dia voarara amin'ny ankamaroan'ny toerana ho an'ny besinimaro any Aotrisy
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Austria » Ny olona tsy vita vaksiny dia voarara amin'ny ankamaroan'ny toerana ho an'ny besinimaro any Aotrisy
Vaovao Mafana Austria • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • culinary • Kolontsaina • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • fiantsenana • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Chancellor Austrian Alexander Schallenberg
Ny fandrarana ny fidirana dia hihatra amin'ny herinandro ho avy ary mihatra amin'ny trano fisotroana kafe, trano fisotroana, trano fisakafoanana, teatra, trano fisakafoanana ski, hotely, mpanao volo ary ny hetsika rehetra misy olona 25 mahery.
Nilaza ny governemanta Aotrisy fa manantena ny isa COVID-19 vaovao hahatratra ny avo indrindra amin'ny herinandro ho avy.
Ny olona rehetra tsy vita vaksiny dia hosakanana tsy hiditra amin'ny lisitra lavabe amin'ny toerana ho an'ny daholobe, ao anatin'izany ny trano fisotroana, trano fisotroana kafe ary hotely.
Hisy fe-potoana tetezamita mandritra ny efatra herinandro, izay tsy hanan-dalàna ireo izay nahazo ny fatrany vaksiny voalohany ary afaka nanao fitiliana PCR ratsy.
Nitanisa fisondrotana haingana tsy nampoizina tamin'ny raharaha COVID-19 vaovao, nanambara ny Chancellor Austrian Alexander Schallenberg fa tsy ho ela dia hosakanana tsy hiditra amin'ny lisitr'ireo toerana ho an'ny daholobe ny olona rehetra tsy vita vaksiny, anisan'izany ny trano fisotroana, trano fisakafoanana, trano fisakafoanana ary trano fandraisam-bahiny.
"Miavaka ny evolisiona ary mitombo haingana kokoa noho ny nantenainay ny fibodoana fandriana fikarakarana marary," hoy i Schallenberg tamin'ny fanambarana ny fameperana vaovao.
Araka ny filazan'i Schallenberg, hihatra amin'ny herinandro ho avy izao ny fandrarana ny fidirana ary hihatra amin'ny trano fisotroana kafe, trano fisotroana, trano fisakafoanana, teatra, trano fandraisam-bahiny, hotely, mpanao volo ary ny hetsika rehetra misy olona 25 mahery.
Ny fameperana vaovao dia mety hisy fiantraikany amin'ny ampahany betsaka amin'ny AotrisyNy mponina ao aminy, izay 36% eo ho eo amin'ny mponina ao aminy dia mbola tsy voatsabo tanteraka amin'ny tsimokaretina COVID-19.
Nahatratra 19 ny tranga vaovao isan'andro COVID-9,388 omaly, nitombo hatrany AotrisyNy firaketana an-tsoratra 9,586 voarakitra tamin'ny taon-dasa, ary ny governemanta dia nilaza fa manantena ny hahatratra ny avo indrindra amin'ny herinandro ho avy.
Na dia hanan-kery amin'ny alatsinainy aza ny fepetra, dia nilaza i Schallenberg fa hisy ny fe-potoana tetezamita mandritra ny efatra herinandro, mandritra izany ireo izay nahazo ny fatrany vaksiny voalohany ary afaka manome fitsapana PCR ratsy dia ho voafafa amin'ny fitsipika. Aorian'ireo herinandro efatra ireo anefa, ny ankamaroan'ny toerana ho an'ny daholobe dia hanokatra ny varavarany ho an'ny olona vita vaksiny tanteraka na ireo izay vao sitrana tamin'ny otrikaretina COVID-19.
Ny fameperana vaovao, izay mitaratra ny fitsipika napetraka ao an-drenivohitr'i Vienne tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity, dia tsy mihatra amin'ny mpiasa ao amin'ny tranobe, fa ho an'ny mpanjifa ihany, araka ny nambaran'ny Chancellor fa "Ny iray dia fialam-boly atao an-tsitrapo - tsy misy manery ahy handeha any. ny sinema na ny trano fisakafoanana – ny iray hafa no toeram-piasako.”
Ny governemanta tarihin'ny mpandala ny nentin-drazana dia nanoritra fameperana henjana kokoa ho an'ireo tsy vita vaksiny raha 600 na mihoatra ny fandriana fikarakarana fatratra any Aotrisy no feno marary COVID-19, mametraka azy ireo amin'ny fomba mahomby. Tamin'ny alakamisy teo dia tafakatra 352 io isa io, saingy nitombo mihoatra ny 10 isan'andro.
Aotrisy dia lavitra ny firenena eoropeana voalohany nampihatra fandrarana fidirana mitovitovy amin'izany, miaraka amin'i Frantsa sy Italia dia namorona rafitra fandalovan'ny vaksiny nomerika manokana mba hampiharana ny fepetra.
Germany, koa izao dia mieritreritra ny hevitra mitovy. Rehefa mampihatra ny fanakatonana sy ny fepetra takian'ny vaksiny ny fanjakana alemà, ny Chancellor Angela Merkel dia nanery ny "fameperana henjana" ho an'ireo tsy voan'ny vaksiny manerana an'i Alemaina tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity.